Cidhiidhi xidhitaanka qaybtan sii wadaan in ay na siiyaan diiran ilaa for marxaladaha ay u yimaadaan, ay la yaab leh sida aad u noqon xirfad dheeraad ah gacanta baabba ama xataa 'Papas’ in ka badan hal on board-ka ah waqti! Iyo wixii ka dambeeyey!
Qof walba oo hadda ka dibna (iyo xaalad joogto ah sii kordhaysa mar kugu dhuftay lambar xaafuun) aad soo gaarto Papa ku'saabsan a 'bararto xawaaraha'. Taxanaha Tan waxaa loo eego kaluu bilowgii sidii aad si tartiib ah u hesho xaliso kaamilayna Papas aad’ xawaaraha iyo jahawareersan,. Waynayn heerarka qaar ka mid ah waa ka adag yahay kuwa kale, laakiin tani guud ahaan waxay ka dhigan tahay adiga oo aan ka helay sida saxda ah si ay u dhamaystiraan ujeedooyinka aad, qaar ka mid ah kuwaan ma aha sida toos ugu beegan sida ay u muuqdaan…ka dibna waxaa jira heerarka sida 111.
Waaxa loo leeyahay Ujeedada a yara toos ugu beegan, garaaca oo ka baxay 45 karootada iyo ugu yaraan kasbado 150 000 dhibcood ..(fadlan dhac illoobin ku saabsan qodobada, ii kalsoon tahay waxaa jira wax niyad-jab badan ugu dambeyntii bobbing in karooto la soo dhaafay baxsanaya iyo soo socda gaaban on dhibcood) laakiin looks kiiskan yihiin wax khiyaaneeya, sida 111 Waa ADAG! waxay u baahan tahay xirfad yar iyo ilaa xad waxa suurto gal ah dad badan oo nasiib!
Isku day in aad abuuraya biinanka aad dabka mudnaanta
Wax marka hore waxaad u samaynayaan waa qaar ka mid ah biinanka dab, xusuusnow in this waxaa loo sameeyaa by kirsiga pear ka timid hal dhinac oo shaashadda ka kale, kiiskan waxa muhiim ah in aad horta taas ka hor chilies cas waa la wada baabbi'iyey. Haddaba sida fiican waa in aad abuuri karaan laba biinanka dab by bilaabo shot awood buuxda bidixda top kadibna shot awood si deg deg ah si buuxda u xaq u top, taasi si kastaba ha ahaatee ka shaqeeya oo keliya haddii aad xaq u haddii kale waqtiga laba papas midba midka kale ku dhuftey sidii ay u gudbayaan dhexe ee. Play hareeraha leh furitaanka shot this, Waxaa laga yaabaa inaad ka samaysaa u shaqeeyaa laba biinanka si bidix ama midig tooganayasa. Waxaan aaminsanahay in ugu yaraan laba biinanka dab on board-ka-maarmaan u ah guusha, labada biinanka dab horeba on board-ka ah bilowga ugu dhow yihiin adag tahay in la kiciyo on iyaga u gaar ah iyo doorka wanaagsan ee ay ka ciyaaraan waa in la kordhiyo nolosha aad Papa dab.
Maxaa ka dhigay heerka this isreebreeb fudud yahay qaabkaaga ee dabacasaha ee u dhexeeya gogo 'baasaboorka ka. The dabacasaha on geesood hoos ahaan waa ay fududahay in la garaaco, haddii aad kiciyo pin dab ayaa si cad ugu safka ugu horreeya ee berry iyo crack meel bannaan ah oo ku dabacasaha ayaa si aad u bilowdo pin bambaano ee gudahood. Talo ku anfacaya in la xasuusto waa haddii aad ku dhuftey pin bam (kuwa cagaaran) qaba Papa horeba u ololaya ku, Papa this ka dibna inflates xitaa dheeraad ah oo ku size abuuraya badan bedka iyo kordhinta suurtagalnimada of gubanaya ilaa qaar ka mid ah Muxudiin oo oranji!
Filed Under: Papa ku'saabsan taxanaha Tagged With: booster, Pin Fire, Pin bambaano, Heerka 111, Papa ku'saabsan
Papa ku'saabsan taxanaha – Heerarka 8-15
By hadda aad noqon doona iyo sidoo kale marka aad u soo asaasidda foomka pear Papa wanaagsan, waxa ay qaadataa wax yar si loo inay ilaaliyaan aad u jahawareersan, Papa isteroberi laakiin aad ugu dhakhsaha badan loo horumariyo doonaa farshaxanka iyo jiri doonin aad joojinta
Tilmaamo ka taxanaha Pope ku'saabsan, Talooyin iyo tabaha
Qof walba jecel yahay a xaq u taxanaha wanaagsan? Oo Papa ku'saabsan ma aha
Papa ku'saabsan taxanaha – Heerarka 1-7, hordhac.
Welcome to Wajiga koowaad ee safarkaaga Papa ku'saabsan, ama sida ay u yaqaannaan 'Forest Maalmihii ah'. Like leh kulan ee ugu wejiga koowaad u heellan in ay aad iskiin dhammaan qaybaha kala duwan ee ciyaarta uu u bixiyaan, iyo horumarinta ee King yihiin in khubaro opinion my at this! Waxay maareeyaan in ay wax yar oo ah wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato in hab in aad nuugayo si raaxo leh in ay muujiyaan!
Heerka 1 iyo in aan la kulano Papa ku'saabsan, ka soo degayo hit hal iyo karootada weligaa delicious! Oo waxaannu soo ogaado oo kaliya aad qabto karaa saddex isteroberi on board-ka ah isla waqtiga aan isku dayno in ay sheegato ugu yaraan 10 000 dhibcood.
Heerka 2 iskudhafaa ilaa qaar ka mid ah furuto soo degayo iyo waxaan ognahay in ay yihiin ugu saddex hits inay ka soo saarto, kuu sheegi kara meesha ay ku jiraan silsiladan by lahaayeen midabka. Mar heerkan ku saabsan yahay barashada raxamaan sida aad ujeedadoodu tahay ugu yaraan 15 000.
Heerka 3 keentaa Qaar ka mid ah chilis kulul oo hadda nasoo sidii aynu isku dayaan in ay higsada a mudan more 18 000 ama wax ka sareeya. Waaxa loo muujiyaa sababta ay had iyo jeer ma aha kuwa xigmadda leh si ay u tirtiri soo baxay oo dhan, biinanka, karooto aad ee bilowgii, lumin this lakabka ugu hooseysa si degdeg ah oo aad wax ay soo kabsato off yeelan doontaa.
Heerka 4 saamaxayaa na loo daboolo squishies Patriots weyn cute iyo weligiisba ku anfacaya. Kuwaasi oo Cinab hareereeyey biinanka buluug yihiin joogto ah guddiga, waxay lagama saari karo iyo ka ciyaaraan door muhiim ah ku daray dib u soo booda dheeraad ah si aad u Papa isteroberi, bartaan si caqli ah u isticmaalaan sida aad ujeedadoodu tahay si ay u ururiyaan 15 000 dhibcood!
Filed Under: Papa ku'saabsan taxanaha Tagged With: Taxanaha Papa ku'saabsan
Papa ku'saabsan biinanka – Isteroberi booster Gaarka ah
Biinanka Papa Qaar ka mid ah in tallaabo!
Biinanka booster Papa ku'saabsan yihiin wax u dhigma ee Candy burburiso’ naca gaar ah iyo super-gaynta. Get your Papa ku'saabsan ku fushadaan, guddiga ee kaliya sida saxda ah iyo aad ooajnabi abaal marin mid ka mid ah shan biinanka gaar ah in kasta waxay leeyihiin dhadhan kala duwan gaar ah oo ku rayraynaya wanaaggii! Marka on biinanka guddiga waa in la garaaco by Papa ku'saabsan a la hawlgeliyaana, ku xiran tahay tallaabo ah ee PIN ku'saabsan ka dibna qaadan doonaa on muujinta, kaas oo socon doona ilaa iyo inta uu ka gubtay baxay ama beero baaldi
Filed Under: Papa ku'saabsan taxanaha Tagged With: Waxuun, Taxanaha Papa ku'saabsan, Biinanka Pope
Waa maxay ee taxanaha Papa ku'saabsan?
King ayaa mar kale sameeyo! Waxay leeyihiin in ay sii daayaan weli ciyaar kale oo terrifyingly qabatimo iyo nashaad in bounces xaq u off xarunta xiiso of maskaxda iyo dalalkii qoto dheer galay aad soo gunaanadeen! ..Waa hagaag sort, of laakiin ma hab cajiib ah!
Available on dhammaan qalabka waaweyn ee